PressReader - Zululand Eyethu: 2017-11-23 - Izod­lalelwa e-Princess Ma­gogo eye-Telkom
Izod­lalelwa e-Princess Ma­gogo eye-Telkom
Zululand Eyethu - 2017-11-23 - SPORT • EZIMIDLALO - Larry Bent­ley
ABALANDELI beb­hola baKwaZulu-Natal ku­zoba­jab­u­lisa ukuzwa nges­imemezelo se-PSL sokuthatha umd­lalo wen­debe ye-Telkom Knock­out Cup, uy­iswe enkundleni yase-Princess Ma­gogo Sta­dium, KwaMashu. Lomd­lalo uzod­lalwa ngeSa­batha lomh­laka 2 De­cem­ber, kanti uzo­qala ngo-18h00 ntam­bama.
Lomd­lalo wa­man­qamu uzoba phakathi kom­petha be­ligi i-Bid­vest Wits, ezidudu­lana ne-Bloem­fontien Celtic.
I-Bid­vest Wits id­lulele kowa­man­qamu emd­lal­weni obun­z­ima, nge­sikhathi iguqisa i-Kaizer Chiefs ngo-1-0, kanti iBloem­fontein Celtic yona iz­ibekele in­dawo ngokuxe­bula iPolok­wane City ngo-4-3, sekukhahlelwa amaphen­athi. Lomd­lalo wala­maqembu owaphela zibam­bene ngo-1-1 nge­sikhathi es­en­geziwe, wawungeSonto.
Yize idol­obha laseThek­wini selisin­gathe imid­lalo em­i­ningi ya­man­qamu, kodwa ku­zobe kun­gokokuqala ukuthi umd­lalo wen­debe uzod­lalelwa enkundleni i-Princess Ma­gogo, emva kwemid­lalo yen­debe yomh­laba ka-2010.
Is­in­qumo sokuy­isa lomd­lalo e-Princess Ma­gogo Sta­dium, sen­ziwe nge­muva kokux­ox­isana nez­inhlaka ezehlukene, ezithin­tekayo.
Princess Ma­gogo to host cup fi­nal